Sicir Bararkii Hanjabada Lagu Dayey Ka Sii Dar .W/Q Maxamed Siciid Gaaxnuug | Somaliland Tomorrow
Sicir Bararkii Hanjabada Lagu Dayey Ka Sii Dar .W/Q Maxamed Siciid Gaaxnuug
July 30, 2017 - Written by adan caydiid
Waligay ka hor xukumadan ma maqal mid lamid ah.
Sicir barar ayaa laga hadlayaa oo ay sidii xaalad amni daro jirto u wasiir u hanjabayaa in ay amaro ku jabiyaan sare u kaca shilinka dollerka.
Xukumadihii hore iyagoon hadal, hanjabin ayaa waxay samayn jireen uun in ay doller jaban kusoo dayaan suuqa oo s.land Shilinka ka uruursadaan Suuqa, marka S.land Shilin la wayo, ayaa waxaa jabaya dollerkii oo suuqa ku badanaya.
markaas ayay ganacsadu cabadi jireen oo ay doller raadin jireen oo qofka boqol doller wata qiimo wacan oo shilinkiisi ah kusiin jireen.
Marka S.land Shilinku kaco ee dadka qaali ku noqdana Suuqa waxay soo galin jireen S,landshilin tiro badan oo dollerka jabnaan laga iibsanayo dadka.
Mida kale hadii ay umada ka naxayaan Inay xukumadu isku daydo Dalka itoobiya Qaadkan inaga soo gala ee Dollerka la inagaga uruursado isagana inay inaga joojiyaan ama Milix inoogu badalan iyo kaluun. si dollerku dibada inooga bixin.
hada lkn dawlad haba yaraato e Dhaqaalaha wax ka taqaan dalka kama taliso, oo wasiiro Qurbaha ku saaqiday ayuunbaa la hadlayaa umada oo sidii colaado dhaceen hanjabaad lasoo taagan uun, hanjabaadiina waxba way qaban la’dahay oo dadka hada jooga waxba kama tarto, hab diblomaasiyadeed ayuunbaa wax loogu sheegaa.
Afaray iga soo cadho maaxday ila eega kolay inay jabnaato waa ina daanweyne lkn aragtidayda ku cabiray e.
Ayaan daran Xukumadaydaay
Dadkii Ku Doortay way Quusteen
Daalis mooye ka hadal jooje
Quus daadsi ayay tagaanyihiin
ee Dulugta-gartu halkay taal
Dhagaha idin daboolane.
Qalinkii Maxamed Siciid gaaxnuug